कोरियन भाषा परीक्षाको आवेदन चैत ९ बाट सुरु » खबरहरुको एउटै केन्द्र
कोरियन भाषा परीक्षाको आवेदन चैत ९ बाट सुरु
आईतवार, चैत्र ६, २०७३ ०८:३६ मा प्रकाशित !
६ चैत, काठमाडौं। रोजगार अनुमति प्रणाली (इपीएस) अन्तरगत सन २०१८ को कोरियन भाषा परीक्षाको फारम आगामी चैत ९ गते बुधबार देखि खुला हुँदैछ । चैत ९ देखि १८ गतेसम्म इपीएस परीक्षाको लागी अनलाइन आवेदन फारम भर्नु पर्ने इपिएसले जनाएको छ । यसकालागी सरकारले सबै तयारी सकाएको इपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक बाबुराम खतिवडाले जनाएका छन ।
खतिवडाका अनुसार यो पटकबाट अनलाइनबाटै फारम भर्ने सुविधा दीने छ । वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तरगतको इपीएस कोरिया शाखाले यस्तो फारम भर्ने अनलाइन प्रणाली विकास गरिसकेको छ । शाखाले आफ्नै स्रोतबाट खर्च गर्ने गरी गतवर्ष नै अनलाइन प्रणाली विकास गरेको थियो । तर, परीक्षण नसकिँदा प्रयोग गर्न सकिएको थिएन ।
यो पटक भने अनलाइन फारम भर्न सकिनेछ । आवेदन बुझाउन घन्टौं लामो लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता हटाउन अनलाइन फारम भर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको इपीएस शाखाका निर्देश्क खतिवडाले बताए ।
अनलाइनमा फारम भर्न ग्लोबल आईएमई बैंकमा तोकिएका शाखामा आवेदन शुल्क भने पहिले नै बुझाउनु पर्नेछ । बैंकबाट रकम जम्मा गरेको कोड राखेपछि मात्रै अनलाइनफारम ‘सबमिट’ गर्न सकिनेछ । साथै मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) अनिवार्य हुनेछ । गतवर्षदेखि नै विभागले एसआरपी अनिवार्य गरेको थियो ।
PREVIOUS POST Previous post: आयोगविरुद्ध राप्रपाको विरोध जुलुस
NEXT POST Next post: उत्तर कोरियाले फेरि शक्तिशाली रकेट इन्जिन परीक्षण
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते आईतवार, चैत्र ६, २०७३ ०८:३६
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस आईतवार, चैत्र ६, २०७३ ०८:३६
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण आईतवार, चैत्र ६, २०७३ ०८:३६
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी आईतवार, चैत्र ६, २०७३ ०८:३६
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? आईतवार, चैत्र ६, २०७३ ०८:३६